အနှိပျခံမယျဆိုရငျ စီရျောနယျဒိုကို သတိရပါ…. ကွံ့ခိုငျမှုကောငျးမှနျနခွေငျးမှာ အနှိပျခံတာက အဓိကတြယျလို့ စီရျောနယျဒိုဖှငျ့ဟ – Premier League Special
အနှိပျခံမယျဆိုရငျ စီရျောနယျဒိုကို သတိရပါ…. ကွံ့ခိုငျမှုကောငျးမှနျနခွေငျးမှာ အနှိပျခံတာက အဓိကတြယျလို့ စီရျောနယျဒိုဖှငျ့ဟ
ပျေါတူဂီအသငျးနဲ့ ဂြူဗငျတပျတိုကျစဈမှူး စီရျောနယျဒိုက သူ့အသကျ ၃၆ နှဈထဲရောကျလာတဲ့အထိ ကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့ဝစှာ ကစားနိုငျသေးတဲ့ အကွောငျးအရငျးတှထေဲက အဓိကကတြဲ့အခကျြတဈခုကို ဖှငျ့ဟပွောကွားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
စီရျောနယျဒိုဟာ မကွာသေးခငျက ဖီဖာရဲ့ The Best ဆုပေးပှဲမှာ ထိပျဆုံး ၃ ဦးစာရငျး ထဲဝငျခဲ့သလို Ballon d’Or အကောငျးဆုံးအသငျးစာရငျးမှာလညျး ပါခဲ့ပွီး Dubai Globe Soccer Awards မှာလညျး ရာစုနှဈရဲ့အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ သူဟာ အားကစားသမားတှထေဲမှာ ကွံ့ခိုငျမှု အကောငျးဆုံးသူတှထေဲမှာ အပါအဝငျဖွဈပွီး ဒီအတှကျလညျး အစားအသောကျကို ဂရုစိုကျသလို အရကျသစောလညျး သောကျသုံးခွငျးမရှိပါဘူး။
ဒါ့အပွငျပှဲစဉျတဈခုပွီးတာနဲ့ သူ့ကွံ့ခိုငျမှုပိုငျးအတှကျ အထူးဂရုပွုဆောငျရှကျသူပါ။ ဒီအထဲမှာ ပှဲစဉျကွောငျ့ ထိခိုကျမှုတှကေိုအမွနျဆုံးပွလြေော့စဖေို့အတှကျ အထူးပွုလုပျထားတဲ့ ရခေဲကနျထဲစိမျခွငျး၊ အနှိပျခံခွငျးတို့အပွငျ နိုကျထရိုဂငျြအရနေဲ့ ကုသမှုခံယူခွငျး၊ ပုံမှနျရကေူးခွငျးတို့ကိုပွုလုပျလရှေိ့ပါတယျ။
သူဟာရီးရဲလျမကျဒရဈမှာ ရှိတုနျးကဆိုရငျ သူ့ကို နှိပျပေးဖို့အတှကျ ၅ ဦးပါအဖှဲ့ကို ရီးရဲလျကဖှဲ့ထားပေးရပွီး ပုံမှနျအနှိပျခံခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ သူက” ကွံ့ခိုငျမှုပိုငျးနဲ့ ပတျသကျရငျတော့ ကြှနျတျောဂရုစိုကျတယျဆိုတာ အားလုံးသိပါတယျ။ အခုခြိနျအထိလညျး အသကျ ၂၀ တုနျးကပွုလုပျခဲ့တဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို ကြှနျတျောလုပျနဆေဲပါဘဲ။
အနှိပျခံမှုဟာ တဈကိုယျလုံးမှာရှိတဲ့ အကွောတှကေိုပွလြေော့စပွေီး နာကငျြမှုတှကေိုလညျး အမွနျသကျသာစပေါတယျ။ တဈခါတလမှော အိမျကိုမနကျ ၂ နာရီမှပွနျရောကျတာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး ကြှနျတျောဟာ SPA ကိုသှားပွီး အနှိပျခံဖွဈအောငျ ခံပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အခုခြိနျအထိ နှေးကှေးသှားတယျလို့ မခံစားရသေးပါဘူး။ အသကျ ၄၀ အထိအကောငျးဆုံး ဆကျကစားနိုငျဦးမှာပါ” လို့ပွောသှားပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလတုနျးကလညျး စီရျောနယျဒိုဟာ သူ့အိမျမှာ အတူနခေဈြသူ ဂြျောဂြီနာရဲ့ အနှိပျခံပနေတေဲ့ ပုံတှကေိုဖွနျ့ဝခေဲ့သေးကွောငျး သိရပါတယျ။
အနှိပ်ခံမယ်ဆိုရင် စီရော်နယ်ဒိုကို သတိရပါ….ကြံ့ခိုင်မှုကောင်းမွန်နေခြင်းမှာ အနှိပ်ခံတာက အဓိကျတယ်လို့ စီရော်နယ်ဒိုဖွင့်ဟ
ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ ဂျူဗင်တပ်တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်ဒိုက သူ့အသက် ၃၆ နှစ်ထဲရောက်လာတဲ့အထိ ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝစွာ ကစားနိုင်သေးတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲက အဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ခုကို ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စီရော်နယ်ဒိုဟာ မကြာသေးခင်က ဖီဖာရဲ့ The Best ဆုပေးပွဲမှာ ထိပ်ဆုံး ၃ ဦးစာရင်း ထဲဝင်ခဲ့သလို Ballon d’Or အကောင်းဆုံးအသင်းစာရင်းမှာလည်း ပါခဲ့ပြီး Dubai Globe Soccer Awards မှာလည်း ရာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အားကစားသမားတွေထဲမှာ ကြံ့ခိုင်မှု အကောင်းဆုံးသူတွေထဲမှာ အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဒီအတွက်လည်း အစားအသောက်ကို ဂရုစိုက်သလို အရက်သေစာလည်း သောက်သုံးခြင်းမရှိပါဘူး။
ဒါ့အပြင်ပွဲစဉ်တစ်ခုပြီးတာနဲ့ သူ့ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းအတွက် အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်သူပါ။ ဒီအထဲမှာ ပွဲစဉ်ကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးပြေလျော့စေဖို့အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ရေခဲကန်ထဲစိမ်ခြင်း၊ အနှိပ်ခံခြင်းတို့အပြင် နိုက်ထရိုဂျင်အရေနဲ့ ကုသမှုခံယူခြင်း၊ ပုံမှန်ရေကူးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
သူဟာရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှာ ရှိတုန်းကဆိုရင် သူ့ကို နှိပ်ပေးဖို့အတွက် ၅ ဦးပါအဖွဲ့ကို ရီးရဲလ်ကဖွဲ့ထားပေးရပြီး ပုံမှန်အနှိပ်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူက” ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ကျွန်တော်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ်။ အခုချိန်အထိလည်း အသက် ၂၀ တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ကျွန်တော်လုပ်နေဆဲပါဘဲ။
အနှိပ်ခံမှုဟာ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အကြောတွေကိုပြေလျော့စေပြီး နာကျင်မှုတွေကိုလည်း အမြန်သက်သာစေပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ အိမ်ကိုမနက် ၂ နာရီမှပြန်ရောက်တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်ဟာ SPA ကိုသွားပြီး အနှိပ်ခံဖြစ်အောင် ခံပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုချိန်အထိ နှေးကွေးသွားတယ်လို့ မခံစားရသေးပါဘူး။ အသက် ၄၀ အထိအကောင်းဆုံး ဆက်ကစားနိုင်ဦးမှာပါ” လို့ပြောသွားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလတုန်းကလည်း စီရော်နယ်ဒိုဟာ သူ့အိမ်မှာ အတူနေချစ်သူ ဂျော်ဂျီနာရဲ့ အနှိပ်ခံပေနေတဲ့ ပုံတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့သေးကြောင်း သိရပါတယ်။
ဖာနနျဒကျက ဝုဗျနဲ့ ပှဲစဉျမှာ ဘိုငျလီကသာ Man of the Match ဆိုပွီးအသိအမှတျပွုခဲ့ပါတယျ…..